March 7, 2021 - Khitalin Media
ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အင်္ဂါ သား၊သမီးတွေ ရှိနေရင် ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ…
March 7, 2021 by Khitalin Media
ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ “အင်္ဂါ “သားသ္မီးတွေရှိနေရင် ဒါလေးတွေ သိထားနော်… “အင်္ဂါ “သားသ္မီးတွေရဲ့အားသာချက်က လူအများက ချစ်ခင်အောင်နေတတ်တာပါပဲ. တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ချစ်မိပြီဆိုရင်လည်း ဘယ်သူမှလိုက်မမှီအောင် ချစ်တတ်ကျတယ်.. ချစ်သူအတွက်ဆိုရင် ကောင်ကင်ကို ဒူးနဲ့တိုက်ရရ သူရဲကောင်းကြီး လုပ်ချင်တာ အဂါင်္သာသ္မီးတွေပါ။ ဝမ်းနည်းလွယ်တယ် ၊ မျက်ရည်လွယ်တယ်.. ကီစ္စတစ်ခုကိုတစ်စိမ့်စိမ့်တွေးပြီးတော့.. တမြည့်မြည့် ခံစားနေတတ်ပြန်တယ်.. ဟာသပြောပြီး ပြုံးနေတတ်ပေမယ့်.. ရင်ထဲက ကြိတ်ငိုနေတတ်တယ်.. စိတ်နာအောင်တော့ သွားမလုပ်မိပါစေနဲ့.. ဒူးထောက်တောင်းပန်တောင် တစ်သက်လုံး ပြန်လှည့်မကြည်တတ်တော့ပါဘူး.. သူတိုကို သွားမကျောမိပါစေနဲ့.. ကိုး ဆယ်ဆလောက် ပြန်ချေ တတ်ကျလို့ပါ.. မိသားစုအရေး သိပ်ကံမကောင်းတတ်ကျပေမယ့်မိသားစုက အားကိုးရတဲ့ သားသ္မီးလေးတွေပါ.. သဝန်တိုတတ်တယ် ၊ ပျော်ပျော်နေတတ်တယ် ၊ လူအများနဲ့ ဝိုင်းဖွဲ့နေရတာထက်တစ်ယောက်ထဲအေးဆေးနေရတာကို ပိုနှစ်သက်ကြတယ်.. ဒေါသဖြစ်ရင် အပြင်မှာပေါက်ကွဲကြတာထက် ပါးစပ်က ပူညံပူညံနဲ့ရေရွတ်နေ … Read more
သူတို့တကယ်ချစ်တဲ့ မိန်းကလေးကိုပဲ ယောကျာ်းလေးတွေ ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့ အရာများ
သူတို့တကယ်ချစ်တဲ့ မိန်းကလေးကိုပဲ ယောကျာ်းလေးတွေ ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့ အရာများ ယောကျာ်းလေးတွေက သူတို့ တကယ်ချစ်ရတဲ့ မိန်းကလေးတွေနဲ့ ဆုံရတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ ပုံစံဟာ တစ်ခြားတစ်ယောက်လိုမျိုး ပြောင်းလဲသွားတတ်ကြပါတယ်။ သူ့ဆီမှာ တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးတဲ့ အပြုအမူလေးတွေနဲ့ အမူအကျင့်လေးတွေကို တွေ့လာရပြီး ဒါတွေက သူတို့တကယ့်ကို တန်ဖိုးထားချစ်ခင်တယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြနေပါတယ်နော်။ ကဲ ယောကျာ်းလေးတွေက သူတို့တကယ်ချစ်မိတဲ့ မိန်းကလေးတွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ ဘာလေးတွေ ပြောင်းလဲသွားတတ်လဲ။ သူ့ဘဝအားလုံးစုံကို ပြောပြတတ်တယ် ယောကျာ်းလေးတွေက တော်ရုံအားဖြင့်တော့ သူတို့ရဲ့ ဘဝအကြောင်းကို ပြောပြရတာ မကြိုက်တတ်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့တကယ် ချစ်မြတ်နိုးမိတဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ ဆုံမိတဲ့အခါမှာ လျို့ဝှက်ချက်ဆိုတာ ဘာမှမထားလိုပဲ သူဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကောင်းအဆိုးအားလုံးကို ပြောပြတတ်ကြပါတယ်။ ဒါက သူမအပေါ် တကယ့်ကို ယုံကြည်စိတ်ချပြီး ချစ်မြတ်နိုးတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ … Read more
မိန်းကလေးတွေ သိထားသင့်တဲ့ ကောင်လေးချစ်ဆေး (၅) မျိုးအကြောင်း
မိန်းကလေးတွေ သိထားသင့်တဲ့ ကောင်လေးချစ်ဆေး (၅) မျိုးအကြောင်း မိန်းကလေးတိုင်း ကိုယ့်ချစ်သူကောင်လေးက ကိုယ့်ကိုအရမ်းချစ်တာတော့ ခံချင်ကြမှာချည်းပါပဲနော်။ ဒီလိုချစ်ဖို့ဆိုတာလည်း ကိုယ်က ချစ်အောင်နေတတ်ဖို့ကလည်း နည်းနည်းလေးလိုပါသေးတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ဒီတစ်ခေါက် ကောင်လေးချစ်ဆေးနည်းလမ်းလေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) နားလည်ဆေး ကောင်လေးတွေသဘောကျကြတဲ့ မိန်းကလေးထဲ သဝန်အတိုလွန်ပြီး ချုပ်ချယ်လွန်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေသိပ်မပါတတ်ကြပါဘူး။ အဓိက ကိုယ်နဲ့သူ့ကြားမှာ နားလည်မှုအပြည့်အဝရှိနေပြီး အပေးအယူတည့်တဲ့ ကောင်မလေးမျိုးကို ကောင်လေးတွေက စိတ်ထဲမှာတကယ်သဘောကျကြတာပါ။ ပျော်ရွှင်တဲ့ relationship တစ်ခုဖြစ်ချင်ရင်တော့ နားလည်မှုရှိဖို့တော့ လိုမယ်နော်။ (၂) Supporting ဆေး ကိုယ့်ချစ်သူကို supporting ပေးတာမျိုးကိုလည်း ကောင်လေးတွေက အရမ်းချစ်တတ်ကြပါတယ်တဲ့။ စာဆိုလည်းစာ၊ အလုပ်မှာဆိုလည်းအလုပ်မှာစသဖြင့် ကောင်လေးရဲ့ တိုးတက်တာတိုးတက်ကြောင်းတွေ၊ ဝါသနာတွေကို အားပေးပြီး စိတ်ညစ်တဲ့အခါ ခိုနားစရာ ရင်ခွင်တစ်စုံဖြစ်အောင်နေခြင်းဟာ ကောင်လေးတွေချစ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ … Read more
မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကို ဘက်မလိုက်ဘူးလို့ တရုတ်ပြောပြီ
“မြန်မာ့အရေး တရုတ်က ဘက်မလိုက်ဘဲ အားလုံးနဲ့ထိတွေ့သွားမယ်လို့ဆို” အိမ်နီးချင်း မြန်မာနိုင်ငံက အကျပ်အတည်းကို ဖြေလျော့နိုင်ဖို့အတွက် တရုတ်အနေနဲ့ ဘယ်ဘက်ကိုမှ မလိုက်ဘဲ အင်အားစုအားလုံးနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံသွားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့ တရုတ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဝမ်ယီက ဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံက တွေ့မြင်လိုတဲ့အနေအထား လုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုလိုက်ပြီး မြန်မာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့အရေးမှာ တရုတ်ရဲ့ပါဝင်မှုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟလတွေကို ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ “တရုတ်ပြည်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကို လေးစားတဲ့အပေါ် အခြေခံပြီး ဘက်ပေါင်းစုံနဲ့ ထိတွေ့ဆက်သွယ်သွားဖို့ ဆန္ဒရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တင်းမာမှုတွေလျော့ကျသွားစေမယ့် အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်လိုပါတယ်”လို့ ဘေးဂျင်းမှာကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဝမ်ယီက ပြောခဲ့ပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေအားလုံးက ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက်နေ့အာဏာသိမ်းမှုကို အပြင်းအထန် ရှုတ်ချနေပေမယ့် တရုတ်နိုင်ငံက တည်ငြိမ်မှုကအရေးကြီးတယ်လို့သာ တစ်လျှောက်လုံးပြောနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံက အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို တရုတ်နိုင်ငံက ထားရှိနေပြီး တရုတ်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်မှုက … Read more
ကိုယ်ကလိုက်ရင် ပြေးမယ့်သူကို လိုက်မနေပဲ ပြန်လှည့်လာပြီး အရင်ကထက်ပိုပြီး လှအောင်နေပြလိုက်ပါ
ဟိုိအရင်တုန်းကဆိုကိုယ့်ရည်းစားနဲ့ပတ်သက်ရင် သိပ်အဆိပ်တက်တာ… ဘယ်သွားနေလဲ ဘာလုပ်နေလဲ မေးရတာနဲ့ အားနေ စိတ်ပူပေးရ စိုးရိမ်ပေးရတာနဲ့စိတ်မချလို့ အနောက်က တကောက်ကောက် လိုက်ရတာနဲ့ ဖုန်းတဂွမ်ဂွမ်ဆက် စပိုင်လုပ်ရတာနဲ့Active ဖြစ်နေရက် စာလာမပိုိ့ရင် စိတ်ကောက်ရတာနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရန်ကြောက်လို့ ဖွက်ထား ဥထားရတာနဲ့ အပြစ်တစ်ခုခုတွေ့ထားပြီဆို အချိန်ကုန်ခံ ရစ်ပြရတာနဲ့ အနားကထွက်သွားမှာစိုးလို့ နေပျော်အောင် ထားပေးရတာနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောရင်မကြိုက် ကက်ကက်လန်ရန်တွေ့ရတာနဲ့ထစ်ခနဲဆို မျက်ရည်ကရှေ့ကအရင်ကျ ငိုမိရတာနဲ့ ဂရုမစိုက်ဘဲ ပစ်ထားလို့ ပွစိပွစိလိုက်ပြောနေရတာနဲ့… ရည်းစားတစ်ယောက် ရထားတာ…မျောက်ငပိ ကိုင်ထားရသလို ဂဏာမငြိမ် ချင်တော့ဘူး ငါးရံ့ပြာထိထားသလို ဖျတ်ဖျတ်ကိုလူးနေရောဆပ်ပြာသည်လင်ပျောက်သလို အရူးတစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီ သူခိုးရွှေကောက်ရထားတဲ့အတိုင်း အိနြေ္ဒကမရ ဆပ်ဆလူးကို ခါနေတာ မြင်လို့တောင်မကောင်းဘူး။ ကိုယ်က အဲ့လိုတွေ အထိမခံဖြစ်ပြ ချစ်ပြလိုက်လို့ နယူတန်လို တန်ပြန်သက်ရောက် အချစ်မခံရတဲ့အပြင် ဟိုကမြောက်ကိုရီးယားသမ္မတ သံပရာသီးစားထားသလို ရုပ်ကတည်ရုံတင်မက … Read more
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအနှံ့အပြားကအစိုးရ ခေါင်းဆောင်တွေကို အိတ်ဖွင့်ပေးစာတစောင်ရေးသားလိုက်တဲ့ မင်းသားချော ပိုင်တံခွန်..
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအနှံ့အပြားကအစိုးရ ခေါင်းဆောင်တွေကို အိတ်ဖွင့်ပေးစာတစောင်ရေးသားလိုက်တဲ့ မင်းသားချော ပိုင်တံခွန်.. လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အာဏာရှင် စစ်ကောင်စီ ရဲ့ အကြမ်းဖက် လု ပ်ရပ်များကို ကမ် ဘာ့နိုင်ငံ အနှံ့အပြား မှာ ရှိတဲ့ အစိုးရခေါင်းဆောင်များထံသို့ ပိုင်တံခွန်က လူ မှုကွန်ရက် စာမျက် နှာမှတဆင့် အိတ်ဖွင့်ပေးစာ တစောင် ရေးခဲ့ပါတယ်။ “မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ လေးစားစွာ၊ ရိုကျိုးစွာနဲ့ ရင်ထဲကနေ လှိုက်လှိုက် လှဲလှဲ တော င်းဆိုချင်ပါတယ်။ နေ့စဉ် နေ့တိုင်းပဲ ကျနော့် အသက်ထက် ငယ်တဲ့ ပြည်သူလူထုထဲက လူငယ်လေးတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တရားဝင် ရွေးကောက်ခံအစိုးရ CRPH က အကြမ်းဖက် သမားတွေလို့ သတ်မှတ် ထားတဲ့ အာဏာသိမ်း စစ်တပ်ရဲ့ … Read more
သင့်ကို တန်ဖိုးထား၊ မထား ဆိုတာသိနိုင်တဲ့ သင့်လက်တွဲဖော်ရဲ့အပြုအမူများ
ချစ်တယ်လို့ပြောတာကတယောက်ယောက်ကိုဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာပြောပြဖို့အလွယ်ဆုံးနည်းဖြစ်ပေမယ့်အဲဒီတနည်းပဲရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ခံစားချက်တွေဖော်ပြတာကတယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူး။တချို့ကစကားလုံးတွေသုံးပြီးတချို့ကအပြုအမူနဲ့ပြပါတယ်။သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကသင့်ကိုလုပ်ပြတဲ့အပြုအမူတွေကဒေါသထွက်စရာစိတ်ပျက်စရာတွေလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ BrightSideကသင့်ချစ်ရတဲ့လူတွေလုပ်ပြတဲ့အပြုအမူတွေကဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာပြောစရာမလိုအောင်သိဖို့နည်း ၆နည်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ ၁။သင်ပြောတာတွေကိုကိုယ်ပိုင်ဒိုင်ယာရီလိုနားထောင်တယ်။ သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကသင့်ပြောတဲ့ပျေါ်စရာကော၊ဝမ်းနည်းစရာကောကိုနားထောင်ပြီးနှစ်သိမ့်ပေးတတ်တယ်ဆိုရင်၊သူတို့ကနားထောင်ပေးရုံတင်မဟုတ်ဘဲသင့်တို့ဆက်ဆံရေးရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပါတန်ဖိုးထားနေတယ်လို့ပြတာပါ။သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ဆက်ဆံရေးကိုပိုခိုင်မာပြီးရိုးသားမှုရှိလာအောင်လုပ်နေတာပါ။ ၂။သင့်ရဲ့အချွဲအနွဲ့တွေကိုကြိုက်တယ်။ သင်ချစ်မိသွားတဲ့အခါမှာချွဲနွဲ့ရတာလဲဆက်ဆံရေးတခုမှာပျော်စရာပါပဲ။သင့်လက်တွဲဖော်ကသင့်ကိုချွဲရတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်သင်နဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်ကိုပိုကောင်းစေချင်ပြီးတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။အဲဒါတင်မကပါဘူး။နဖူးကိုနမ်းခြင်းနဲ့အနောက်ကသိုင်းဖက်ခြင်းတွေကစကားလုံးတွေမပါဘဲသင်ကအရေးကြီးကြောင်းကိုပြနေတာပါ။ ၃။သင့်ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်အောင်တွန်းအားပေးတယ်။ ဆက်ဆံရေးတခုဆိုတာကသင်တို့အချိန်တွေထပ်တူကျတာမဟုတ်သလိုတနေကုန်စာပို့နေလို့လဲမရပါဘူး။နေ့တနေ့ကုန်သွားရင်မတူတဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့အိမ်မက်တွေအတွက်ရှင်သန်ကြတာပါ။သင့်လက်တွဲဖော်ကအိမ်မက်တွေအောင်မြင်ဖို့တွန်းအားပေးပြီးသူ့ကိုအာရုံမစိုက်တာကိုအထွန့်မတက်ဘူးဆိုရင်တော့သူကသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားတာပါ။သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်မှာလဲသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့အခွင့်အရေးရှိတာကိုနားလည်ခြင်းကရင့်ကျက်မှုနဲ့အချစ်စစ်ပါပဲ။ ၄။သင့်ကိုအိမ်မှာကူညီတယ်။ သင့်လက်တွဲဖော်ကအဝတ်လျှော်တာနဲ့တခြားအိမ်အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတာမညည်းညူဘူးဆိုရင်သင့်ကိုတူညီတဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်လို့သဘောထားပြီးမျှဝေခံစားတာပါ။ဆက်ဆံရေးတခုမှာသာတူညီမျှစိတ်ရှိတဲ့သူကိုရှာဖို့အရမ်းခက်တဲ့အတွက်အဲလိုလူကိုတွေ့ရင်လက်မလွှတ်ပါနဲ့။ ၅။သူတို့ချစ်ရတဲ့တခြားလူတွေကိုသင့်အကြောင်းပြောဖို့ဝန်မလေးဘူး။ အရှင်းဆုံးလက္ခဏာကတော့သင့်လက်တွဲဖော်ကမိသားစုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုသင့်အကြောင်းမဖုံးထားတာပါပဲ။သင်တို့ပတ်သတ်မှုအကြောင်းတခြားသူကိုပြောဖို့ဝန်မလေးဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ကသင်နဲ့ထားတဲ့ကတ်တွေကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာနဲ့အနာဂတ်ကိုသင်နဲ့သွားမယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။ ၆။သင်တို့နှစ်ယောက်အပြင်သွားတဲ့အချိန်တိုင်းလက်ချိတ်ထားတယ်။ လူကြားထဲမှာတောင်လက်ချိတ်သွားနေတာကလဲအဆင်ပြေပါတယ်။အဲဒါကိုအနီကတ်လို့သဘောထားရင်ရပါပြီ။သင်တို့နှစ်ယောက်ပတ်သတ်နေတယ်ဆိုတာတခြားသူတွေကိုပြနေတာပါ။အဲဒါကြောင့်လူကြားထဲမှာတောင်သင်နဲ့ခပ်ခွာခွာမနေနိုင်ဖြစ်နေတာပါ။ Writer -Min Thu ( XYZ NEWS ) Unicode ခဈြတယျလို့ပွောတာကတယောကျယောကျကိုဂရုစိုကျတယျဆိုတာပွောပွဖို့အလှယျဆုံးနညျးဖွဈပမေယျ့အဲဒီတနညျးပဲရှိတာတော့မဟုတျပါဘူး။ခံစားခကျြတှဖေျောပွတာကတယောကျနဲ့တယောကျမတူပါဘူး။တခြို့ကစကားလုံးတှသေုံးပွီးတခြို့ကအပွုအမူနဲ့ပွပါတယျ။သငျ့ရဲ့လကျတှဲဖျောကသငျ့ကိုလုပျပွတဲ့အပွုအမူတှကေဒေါသထှကျစရာစိတျပကျြစရာတှလေဲဖွဈနိုငျပါတယျ။ BrightSideကသငျ့ခဈြရတဲ့လူတှလေုပျပွတဲ့အပွုအမူတှကေဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာပွောစရာမလိုအောငျသိဖို့နညျး ၆နညျးကိုဖျောပွထားပါတယျ။ ၁။သငျပွောတာတှကေိုကိုယျပိုငျဒိုငျယာရီလိုနားထောငျတယျ။ သငျ့ရဲ့လကျတှဲဖျောကသငျ့ပွောတဲ့ပြျေါစရာကော၊ဝမျးနညျးစရာကောကိုနားထောငျပွီးနှဈသိမျ့ပေးတတျတယျဆိုရငျ၊သူတို့ကနားထောငျပေးရုံတငျမဟုတျဘဲသငျ့တို့ဆကျဆံရေးရဲ့ယုံကွညျမှုကိုပါတနျဖိုးထားနတေယျလို့ပွတာပါ။သငျ့ရဲ့လကျတှဲဖျောဆကျဆံရေးကိုပိုခိုငျမာပွီးရိုးသားမှုရှိလာအောငျလုပျနတောပါ။ ၂။သငျ့ရဲ့အခြှဲအနှဲ့တှကေိုကွိုကျတယျ။ သငျခဈြမိသှားတဲ့အခါမှာခြှဲနှဲ့ရတာလဲဆကျဆံရေးတခုမှာပြျောစရာပါပဲ။သငျ့လကျတှဲဖျောကသငျ့ကိုခြှဲရတာကွိုကျတယျဆိုရငျသငျနဲ့ရှိနတေဲ့အခြိနျကိုပိုကောငျးစခေငျြပွီးတနျဖိုးထားတယျဆိုတဲ့သဘောပါ။အဲဒါတငျမကပါဘူး။နဖူးကိုနမျးခွငျးနဲ့အနောကျကသိုငျးဖကျခွငျးတှကေစကားလုံးတှမေပါဘဲသငျကအရေးကွီးကွောငျးကိုပွနတောပါ။ ၃။သငျ့ရညျမှနျးခကျြတှအေောငျမွငျအောငျတှနျးအားပေးတယျ။ ဆကျဆံရေးတခုဆိုတာကသငျတို့အခြိနျတှထေပျတူကတြာမဟုတျသလိုတနကေုနျစာပို့နလေို့လဲမရပါဘူး။နတေ့နကေု့နျသှားရငျမတူတဲ့ရညျမှနျးခကျြနဲ့အိမျမကျတှအေတှကျရှငျသနျကွတာပါ။သငျ့လကျတှဲဖျောကအိမျမကျတှအေောငျမွငျဖို့တှနျးအားပေးပွီးသူ့ကိုအာရုံမစိုကျတာကိုအထှနျ့မတကျဘူးဆိုရငျတော့သူကသငျ့ရဲ့ကိုယျပိုငျအခြိနျကိုတနျဖိုးထားတာပါ။သငျ့ရဲ့လကျတှဲဖျောမှာလဲသူ့ရဲ့ကိုယျပိုငျအိမျမကျကိုအကောငျအထညျဖျောဖို့အခှငျ့အရေးရှိတာကိုနားလညျခွငျးကရငျ့ကကျြမှုနဲ့အခဈြစဈပါပဲ။ ၄။သငျ့ကိုအိမျမှာကူညီတယျ။ သငျ့လကျတှဲဖျောကအဝတျလြှျောတာနဲ့တခွားအိမျအလုပျတှကေိုလုပျရတာမညညျးညူဘူးဆိုရငျသငျ့ကိုတူညီတဲ့တနျဖိုးရှိတယျလို့သဘောထားပွီးမြှဝခေံစားတာပါ။ဆကျဆံရေးတခုမှာသာတူညီမြှစိတျရှိတဲ့သူကိုရှာဖို့အရမျးခကျတဲ့အတှကျအဲလိုလူကိုတှရေ့ငျလကျမလှတျပါနဲ့။ ၅။သူတို့ခဈြရတဲ့တခွားလူတှကေိုသငျ့အကွောငျးပွောဖို့ဝနျမလေးဘူး။ အရှငျးဆုံးလက်ခဏာကတော့သငျ့လကျတှဲဖျောကမိသားစုနဲ့ပတျဝနျးကငျြကလူတှကေိုသငျ့အကွောငျးမဖုံးထားတာပါပဲ။သငျတို့ပတျသတျမှုအကွောငျးတခွားသူကိုပွောဖို့ဝနျမလေးဘူးဆိုရငျတော့သူတို့ကသငျနဲ့ထားတဲ့ကတျတှကေိုတနျဖိုးထားတယျဆိုတာနဲ့အနာဂတျကိုသငျနဲ့သှားမယျလို့ဆိုလိုတာပါ။ ၆။သငျတို့နှဈယောကျအပွငျသှားတဲ့အခြိနျတိုငျးလကျခြိတျထားတယျ။ လူကွားထဲမှာတောငျလကျခြိတျသှားနတောကလဲအဆငျပွပေါတယျ။အဲဒါကိုအနီကတျလို့သဘောထားရငျရပါပွီ။သငျတို့နှဈယောကျပတျသတျနတေယျဆိုတာတခွားသူတှကေိုပွနတောပါ။အဲဒါကွောငျ့လူကွားထဲမှာတောငျသငျနဲ့ခပျခှာခှာမနနေိုငျဖွဈနတောပါ။ Writer -Min Thu ( XYZ NEWS )
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ အပျို စစ်မစစ် ပြောလို့ရတယ်ဆိုတာ တကယ်ဟုတ်မဟုတ်
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ အပျို စစ်မစစ် ပြောလို့ရတယ်ဆိုတာ တကယ်ဟုတ်မဟုတ် ဒီကိစ္စက ယောင်္ကျားလေးတွေကြားမှာ တော်တော်အပြောများတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ အပျိုစစ်မစစ်ဆိုတာကို ခန့်မှန်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတာက တကယ်ရော ဟုတ်နိုင်ပါ့မလား။ ပြီးတော့ အပျိုစင်မိန်းကလေးနဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်အတူနေရင် သွေးထွက်တယ်ဆိုတာကရော ခိုင်လုံတဲ့ အချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သလား။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေ၊ လှုပ်ရှားပုံတွေကို အပေါ်ယံလောက် ကြည့်ပြီး အပျိုစစ်မစစ် ပြောတာကတော့ မိန်းကလေးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို မလေးစားရာကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုခန့်မှန်းချက်တွေကို အမှန်လို့ ထင်မှတ်မှားနေသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီခန့်မှန်းချက်တွေဟာ တကယ်ရောအမှန်ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင်ဆိုတာကို သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ၁။ အပျိုမဟုတ်သူတွေ လမ်းလျှောက်ရင် ခြေထောက်ကားတယ် (မှား) ဒီအချက်က အများစုလက်ခံထားတဲ့ အမှားကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက် လမ်းလျှောက်တဲ့ပုံက သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ပုံနဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။ တင်ပါးရိုးဘယ်လော်ကကျယ်၊ … Read more
ယောက်ျားလေးများ အမြတ်တနိုးယူသင့်သော မိန်းမ (၁၀) မျိုး
(၁). အနာရောဂါကင်းရှင်းပြီး အနေအထိုင်သိမ်မွေ့သန့်ရှင်းသော မိန်းမ (၂). မိဘ အား ပြုစုလုပ်ကျွေး လိုစိတ် ရှိပြီး ကိုယ့်ထက် အကြီး များအား လေးစားစွာ ဆက်ဆံ တတ်ပြီး ကိုယ့်ထက် အငယ် များအား အရာရာ နားလည် ထိန်းကျောင်းပေး တတ်သော မိန်းမ… (၃). ပုံမှန်အားဖြင့် ယောကျာ်း ဆို စိတ်မ ဝင်စားတတ်..ကိုယ်နဲ့တွေ့မှ အိမ်ထောင်ပြု ခြင်း လက်ထပ်ခြင်း အမှုကို စဉ်းစားဖြစ်သော မိန်းမ (၄). အရာရာကို လွယ်လွယ် မယုံ ဉာဏ်နဲ့ယှဉ်ကာ ဆုံးဖြတ်လုပ် ကိုင်တတ်သော မိန်းမ ထို အသိဉာဏ် အတွေ့အကြုံ လောကအမြင် များကိုလဲ သားသမီး များအား သွန်သင် လမ်းညွှန်ပြနိုင်သော မိန်းမ… (၅). … Read more
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ထဘီတန်းအောက်ကို ဝင်ရင် ဘုန်းနိမ့်တတ်သလား….?
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ထဘီတန်းအောက်ကို ဝင်ရင် ဘုန်းနိမ့်တတ်သလား? ” နိမ့်တယ်ထင်ရင် နိမ့်ပါတယ် ၊ မနိမ့်ဘူးထင်ရင် မနိမ့်ပါဘူး” ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ထဘီကြောင့် နိမ့်တာ မဟုတ်ပဲ ” ထင် ”ဆိုတဲ့ ဥပါဒါန်ကြောင့်သာ နိမ့်သွားတယ်လို့ထင်တာပါ …” ” ပိတ်စတစ်ခုပဲဖြစ်တဲ့ ထဘီလို နူးညံ့တဲ့ပိတ်စ တစ်ခုဟာ သင့်ကိုဘယ်လိုများဒုက္ခရောက်စေမလဲ။ ဘုန်းနိမ့်တယ် ဆိုတာက သင်ထင်သလိုမဟုတ်ပြန်ဘူး။ “ဘုန်းနိမ့်ပြီဟဲ့”ဆိုတဲ့ သင့်ရဲ့ ခံစားချက်ဟာ negative feeling ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်။ စိတ် အလိုမကျဖြစ်စေတယ်။ စိတ်ကို နောက်ကျိစေတယ် ၊ အဲဒါဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေးကျဆင်းခြင်း ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘုန်းနိမ့်ခြင်းပါပဲ ” ” ဒါဆို အရှင်ဘုရားအနေနဲ့ ဝင်ခဲ့မိရင်ရော နိမ့်မှာလား ” ” အဓိပ္ပာယ်မဲ့ … Read more
KHITALIN MEDIA provide celebrity, life style,breaking news, local news and International news.Articles are displayed in tex,video and photos.Vistors can read news in articles type of categories in https://khitalinmedia.com/ (example - News, Entertainment,Sport, Health, Celebrity, Media &Music ...etc). Hope our vistors enjoy our website.
© 2021 Khitalin Media • Built with GeneratePress